राजनीति बिग्रेको देश, हामी युवा, हाम्रा चूनौती र सम्भावनाहरु
मैले धेरैपटक सुन्दै आएको छु – युवाहरु परिवर्तनका संवाहक हुन । यी उर्जाशील शक्ति हुन । युवा शक्तिको समुचित प्रयोगमा घगडान परिवर्तनहरु सम्भव छन । यी सो¥है आना सत्य छन । तथापी यी पेचिला सत्य कुराहरु हाम्रो देशमा कहिल्यै वास्तविकतामा परिणत हुन सकिरहेका छैनन् । सार्वजनिक सभाहरुमा नेताहरुको भाषणमा उच्च प्राथमिकतामा पर्ने युवा सम्बन्धी उनीहरुका यी बुझाईहरु, कार्यान्वयनका बखत कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेका छैनन् ।
गल्कोट साप्ताहिकले आफ्नो रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा २५ औं अंक तयार पार्दै गर्दा, मित्र दिल शिरीषले युवाहरुका चूनौती र सम्भावनाका विषयमा लेख तयार पार्न गरेको आग्रहपछि मैले अनुभूत गरेको हामी युवाहरुका लागि सबभन्दा ठूलो चूनौती नै हामी युवाहरुका संभावनाका विषय भाषणमा मात्र सिमित पारिनुमा देखेको छु । कतिपय राजनैतिक युवाहरुर्लाइ लाग्ला, यसले फगत कुरा गरिरहेछ । हुनसक्छ, यी राजनीतिमा अभ्यस्त युवाहरुका लागि फगत कै कुरा हो । गलफती नै हो । तर एक आम नेपाली युवा भएर देशमा विद्यमान गञ्जागोल र राजनैतिक हठताका बीचमा कुन नेपाली आम युवाले सम्भावनाका स्वर्गीय स्वप्न देख्न समर्थ होला र ? सधैं भाषणमा मात्र युवाहरुलाई उर्जाशील शक्ति भन्नेहरुले विकास निर्माणको कुन उपयुक्त ठाउँमा युवाहरुको प्रयोग गर्न सकेका छन ?
हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरुले आफ्ना तुच्छ राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न युवाहरुलाई हिंस्रक बन्न उद्यत पारिरहेका थुप्रै बलिया प्रमाणहरु अहिले मेरा आँखामा नाचिरहेछन – बिझाउने दृश्य बनेर । सडकमा इट्टा युद्द गर्न र रेलिङ भाँच्ने बाहेक कुन रचनात्मक कार्यमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गरेका छन– हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरुले आफ्ना भातृसंगठनका युवाहरुलाई ? म देख्तिन – कुनै असल उदाहरणहरु । हुन त देश निर्माणका लागि राजनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मेरो दुईचार थान विकसित मुलुकहरुको घुमाइको सिकाई हो । तर, मैले मेरो देशको राजनीतिबाट हामी युवाहरुले प्राप्त गरेका खास त्यस्ता कुनै उपलब्धीहरु छैनन, जसमा म गर्व गर्न सकुँ । राजनीति बिग्रेको देशको एक जिम्मेवार युवा भएका नाताले मेरो देशका युवाहरुका अगाडि थुप्रै चूनौतीहरु मात्र म देख्तछु । तर सम्भावनाका अति मिहिन उज्याला प्रकाशहरु पनि हाम्रा अगाडि ज्वाजल्यमान प्रदिप्त भएको म नकार्न चाँहि सक्दिन ।
पैंतालिस प्रतिशत बेरोजगार युवाहरु रहेको तथ्याङ्क पढिरहँदा मैले ५५ प्रतिशत रोजगार युवाहरुलाई सम्झेँ । र, मलाई अचम्म लागिरह्यो – यो ५५ प्रतिशतको हिसाबभित्र पिसाब फेर्ने राम्रो शौचालय निर्माण गर्ने सपना सजाएर खाडीको ५० डिग्री सेन्टिगे्रडको तापक्रममा रगत छाद्न बिबश मेरा दाजुदिदी, भाईबहिनीहरु अटाए हुनन कि ? यदि बिदेश बाहिर रोजगारीका लागि गएकाहरु पनि रोजगार भएकाहरुकै आँकडा भित्र अटाएका भए त हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्दछौ्र कि हाम्रो देशमा बेरोजगारिताको क्षेत्र कति बिकराल छ । हुन पनि केहि हप्ताअगाडि कोरियामा श्रमीकका रुपमा जान तम्तयार भै भाषा परिक्षामा संलग्न ७० हजार युवाहरुको उपस्थितीले पनि त प्रमाणित गर्दछ, कि हामी युवाहरुका लागि सबभन्दा ठूलो चूनौती देशभित्रै रोजगारीको सृजना हुन नसक्नु हो । र, महत्वपूर्ण चूनौती त स्वदेशमा हामी केहि पनि गर्न सक्दैनौ भन्ने हाम्रो हतोत्साही मानशिकता नै हो ।
हाम्रा अगाडि “रोजगारी हुन नसक्नु वा रोजगारीताको सृजना गर्न नसक्नु” बाहेक पनि कैंयन अरु चूनौतीहरु पनि छन । जस्तो कि हामी युवाहरुले प्राप्त गरिरहेका विद्यालय तथा विश्वबिद्यालयका शिक्षाहरु पनि त विश्वका अरु देशहरुको शैक्षिक प्रणालीहरुको दाँजोमा बैज्ञानिक, सृजनात्मक र पेचिला छैनन । त्यसैले त विकसित समाजका युवाहरुको सोच्ने शैली र हाम्रा सोचहरुमा ठूलो भिन्नता छ । के शिक्षाले ब्यक्तिको सृजनशीलता निर्दिष्ट गर्दैन त ? सिकाइ सिर्जनशील भए पो सोचाईहरु रचनात्मक बन्न सक्दछन् ।
प्रविधीको जानकारी र प्रयोग पनि त हामी नेपाली युवाहरुका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । मलाई स्मरण छ – केहि दिन अगाडि, म्याग्दीको एउटा कलेजमा “इमेल, इन्टरनेट प्रयोग” का सम्बन्धमा गरिएको सर्भेक्षणमा कक्षा ११ मा अध्ययन गर्दै गरेका युवाहरु मध्ये ८० प्रतिशत युवाहरुलाई त इमेल इन्टरनेट भनेकै के हो भन्ने पत्तो रहेनछ ! यहि उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, हामी नेपाली युवाहरु विश्वमा विकास भएका पछिल्ला उन्नत प्रविधीको पहुँचभन्दा कति बाहिर छौं ! यहि तीतो यथार्थबिच, विश्वका अन्य मुलुकका युवाहरु झैं अब कुन आधारमा हामी पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धी र परिष्कृत छौं भन्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कसरी एक सक्षम र उपयुक्त उम्मेदवारका रुपमा हामी आफूलाई उभ्याउन सक्छौं होला ?
चूनौती सँगसँगै हामीसँग थुप्रै सम्भावनाहरु पनि छन । त्यसकारण पनि हामीसँग चूनौतीहरु मात्र छन भनि सम्भावनका अति उज्याला पक्षहरुलाई इन्कार गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । रोजगारीका लागि विदेशीका शौचालय सफा गर्न नहिच्किचाउने हामीहरुले हाम्रै माटोमा ब्यवासायिक तरकारी खेती शुरु किन नगर्ने ? पुष्पखेती, पशुपालन, होटल ब्यवसाय, पर्यटनसम्बन्धी ब्यवसाय, जडिबुटी संकलन र प्रशोधन सम्बन्धी उद्यम, सौन्दर्य सम्बन्धी ब्यवसायहरु र सूचनाप्रविधी सम्बन्धी उद्यमशिलता के हामीहरु सञ्चालन गर्न सक्दैनौं होला र ?
थोरैमा पनि सन्तुष्ट हुने, आत्मनिर्भरताका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने र श्रम सबै समान हुन भनि श्रमका सबै पक्षलाई बराबर सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न सक्यौं भने हाम्रा अगाडि थुप्रै सम्भावनाहरु छन । ती यस्ता सम्भावनाहरु छन जसले हाम्रो क्षमता विकास मात्र गर्दैनन, हामीले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने अवसरका ढोकाहरु पनि उघार्ने छन । नबिर्सौ – स्वदेशमै श्रम गर्ने हाम्रो अठोटले हामीलाई मात्र सम्पन्न बनाउँदैन, राष्ट्रलाई समेत सभ्य र समुन्नत बनाउँदछ ।
बागलुङबाट प्रकाशित हुने गल्कोट साप्ताहिकका लागि सुरक्षित गरिएको ।